I-DPT-S1 okanye incwadi yamanqaku ka-Sony yedijithali iyaqhubeka ukuthengiswa ngoDisemba | Zonke iReaders
I-Sony Digital Notebook okanye i-DPT-S1 iya kuthengiswa ngoDisemba
UJoaquin Garcia | | I-eReaders, isibulali, Sony
Ngexesha lomhla wayizolo, iindaba zokuphehlelelwa kwe Incwadana yeNqaku ledijithali yakwaSony okanye i-DPT-S1, igama lakhe lokwenyani. Le eReader iya kuba yeyokuqala ukuba nescreen se-13,3 or okanye into efanayo, ubungakanani bepoli. Ngokweendaba zamva nje ebesinazo, U-Sony wayevavanya i-DPT-S1 kwiiyunivesithi ezahlukeneyo zaseJapan ukubona ukuba isebenza njani kwilizwe labafundi.. Kubonakala ngathi iziphumo ziba ntle kangangokuba ukuphela konyaka, zijongane nephulo leKrisimesi I-Sony DPT-S1 iya kuthengiswa nge «isezantsi»Ixabiso lama-euro angama-754.
Nangona ekugqibeleni kubonakala ngathi eyona njongo iphambili yale eReader okanye incwadana yokubhala yedijithali iya kuba lihlabathi leshishini, kuba amandla ayo aya kuncitshiswa ngokunxulumene nexabiso. Kwelinye icala, eli xabiso ayiloxabiso lomfundi, kodwa lilungele iipokotho ezijiyileyo.
Iimpawu zokugqibela ze-DPT-S1
Ngokumangalisayo I-DPT-S1 inokufunda kuphela iifayile zePDF, mhlawumbi yeyona nto imangalisayo, kuba awuzukufunda okanye U-Epub, kude ne-Epub3 njengabantakwabo. Ngokubhekisele kwiprosesa kunye nenkumbulo, amaxwebhu asemthethweni Sony ayithethi kwanto nangona ngokolu xwebhu, eyona nto ibalulekileyo kukuba I-Sony DPT-S1 isebenza kumncedisi ukuze zombini iprosesa kunye nenkumbulo yegusha ibe zizinto ezingathathi ntweni. Inkqubo ye- isikrini si-13,3 ″ ngesisombululo se-1.200 × 1.600I-tactile kwaye ine-16 grey esikalini. Ukugcinwa kwayo yi-4Gb nangona umsebenzisi angasebenzisa kuphela i-2.8 Gb nangona ine-microslot efikelela kwi-32 GB, esinokuthi ngayo sibe malunga ne-35 Gb. Inonxibelelwano olunamandla lweWi-Fi olungasayi kunciphisa ukuzimela kwesixhobo, esiya kuba malunga neeveki ezimbini ngokusetyenziswa ngokulingeneyo kweWi-Fi kunye neeveki ezintathu ngaphandle kokusebenzisa iWi-Fi.
Enye into ebalulekileyo ye I-DPT-S1 ubunzima bayo, I-358 gr., ubunzima obuyinika ngokwenene isiteketiso se «Incwadana yedijithali«. Khumbula ukuba ngoku, Uhlobo lwe-DX eyiReader enesona sikrini sikhulu, 9,7 ″, inobunzima obuyi-536 gram. kwaye iimodeli ezimbini zokugqibela ze-Ipad ziphakathi kwama-438 gr. kunye ne-600 gr. bonke abanescreen esincinci.
El I-DPT-S1 Iza kunye neadaptha yamandla yokutshaja kunye nosiba, isixhobo esiluncedo esiya kuvumela ukubhala kunye nokuchaza amaxwebhu. Ukongeza kwiimpawu ezizinzileyo, ixabiso lale fowuni sele lilungisiwe. Ngelishwa ayifumaneki kuye wonke umntu, kunokuba bambalwa, malunga ne-754 euro. Ixabiso elikususa kude kwihlabathi loluntu kunye noluntu ngokubanzi, kuba ngexabiso, zombini izikolo, iiyunivesithi okanye abantu ngokubanzi baya kuthenga imodeli ye-Ipad kwaye basenemali eshiyekileyo.
Ukusuka kwinto endiyibonayo kulwazi lobuchwephesha, I-DPT-S1 Yenzelwe ukuba isebenze njengeqela njengeqela, apho umntu omnye anokusebenzisa iserver kwaye abanye abantu baya kusebenza kumaxwebhu ngayo. I-DPT-S1 kunye nosiba lwakho, ukwazi ukubona nokwabelana ngomsebenzi wakho nezinye izixhobo. Yiza, ngokwenene into eyenzayo yinkqubo yeklayenti yomSebenzi engacacanga ekhoyo nakwiyunivesithi. Ngaphandle kwayo yonke into, kuyadanisa ukuba uSony ubeke ixabiso eliphezulu kangaka kwesi sixhobo sithembisayo. Kwelinye icala, ukusetyenziswa kwePdf kuphela kususa umnqweno wayo nayiphi na into onokuyithenga kuba uninzi alusebenzisi i-pdf njengefomathi esemgangathweni, ukusetyenziswa kwe-html okanye i-port port, singasathethi ke ngefomathi ye-Epub, kuya kuyiphucula kakhulu inzala yiyo. I-DPT-S1. Andazi ukuba izakujongeka kanjani kuwe kodwa ndikufumene oku kusothusa kwaye kuyadanisa kwaye ndiyathemba ukuba u-Sony ucinga ngexabiso layo kunye nesoftware okanye kungenjalo ndicinga ukuba I-DPT-S1 U-Sony uza kutyiwa neetapile eYurophu, Ngaba awucingi?
Iinkcukacha ezithe xaxe - Incwadana yedijithali kaSony ibonwa kwakhona, Ukujongwa ngokutsha kwe "notebook yekamva" lakwaSony
Umthombo kunye nomfanekiso- I-Sony Japan
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » isibulali » I-eReaders » I-Sony Digital Notebook okanye i-DPT-S1 iya kuthengiswa ngoDisemba
Isixhobo simnandi kodwa, njengoko usitsho, siyadanisa ngokweefomathi ezixhasiweyo kunye nexabiso eliphezulu kakhulu. U-Sony akalunganga (kwakhona). Ngaba ngekhe kubengcono ukuyenza ihambelane nezinye iifomathi kwaye ngexabiso elifikelelekayo (i- € 500 ngexabiso eliphezulu)? Andiqondi ukuba bayenzela imveliso bambalwa kakhulu abakwaziyo ukuyenzela wonke umntu ... baya kuyazi.
UJoaquin Garcia sitsho
Ndikunye nawe Javi, elona lishwa likhulu kukuba ukusebenzisa umgaqo-nkqubo weAmazon okanye ezinye iinkampani, oko kukuthi, ukuzithengisa ngexabiso eliphantsi, ufikelela kwinqanaba apho wenza khona imali, kwaye ngale modeli uSony wayenayo i-inshurensi. Kubi kakhulu ngayo, kodwa ndithembele kubo ukuba bayiqonde kwaye banciphise amaxabiso, kungekuko ngelize ndicinga ukuba benze into efanayo nePSP.
Phendula kuJoaquín García
Kukuthini ukukhathazeka ngexabiso, andikaboni iqela elibi kunelabafundi be-elektroniki. Kukho into ebizwa ngokuba luqoqosho lwesikali esithetha ngeendleko zoncedo ezifunyanwa yinkampani kulwandiso.
Ukuba kukho into enokubangelwa yi-E-inki, ayizizo amaxabiso ayo, ekufuneka ekuqaleni abe phezulu; Kukuthanda kwakhe ukungandisi imarike ukusuka kwi-inki ye-elektroniki ukuya kwiitafile, iilaptops kunye nokujonga, kunye nokunyanzelisa ukuqhubeka nokugxininisa kwizikrini ezincinci zabafundi be-elektroniki.
Le mveliso ngokukodwa izisa isikrini esifanelekileyo, ukuba kukho into ekufuneka ibekiwe kukusebenza kwayo, hayi amaxabiso ayo.
Ndingumnikazi we-intshi eyi-1000 ye-Irex DR10S iminyaka emininzi. Ulwazi endilufumana kwi-intanethi, ndiludlulisela kwiPDF kwaye ndise kumfundi ukuze alufunde. Ukuba esi sixhobo sindivumela ukuba ndikhangele ulwazi kwaye ndifunde ngokuthe ngqo kwi-intanethi, kuyinzuzo ukuba ndiyithenge; kodwa ukuba kuya kufuneka ndenze njengakuqala, ngenxa yoko ndikhetha i-DR1000 yam.
Andazi ukuba uza kuba namandla mni okuthenga, Galib, kodwa olo hlobo loqoqosho ngalo mzuzu nakwilizwe elinjengeSpain alizukusebenza, nokuba ungabeka kangakanani isikali soqoqosho (apho, ukongeza, isebenza ixesha elide kwaye sonke siyazi ukuba into abayibeka kwimarike ayisiyiyo eyokugqibela, oko kukuthi, baya kuyiphucula kwiinyanga ezimbini, njalo njalo). Ngapha koko, inkampani efana no-Sony ingathoba ngokulula, hayi iindleko zemveliso, ukuba ayililo ixabiso lentengiso, kuba ezi zinto zenziwa kakhulu kwaye hayi amaxesha ngamaxesha, ukwandisa imveliso okanye ukunciphisa ngokuhambelana nentengiso (okanye ukuba oku kwenzeka emva kokwenziwa linani elilungileyo, kule meko, iincwadi zeencwadana zombane).
Ngayiphi na imeko, andiliboni ikamva lale mveliso ngezizathu ezahlukeneyo. Elokuqala lixabiso (umhlobo osisityebi) kwaye elesibini libangelwa kukusebenza kwalo okuphantsi xa kuthelekiswa nezinye iincwadana ezinombhalo ezingekafiki kwimarike kwaye ngethemba lokuba azihlali kwiphepha elimanzi (njengeNoteSlate, umzekelo).
Ngeliphandle, ekugqibeleni ndenza isixhobo esinomdla, nescreen njengoko uThixo wayefuna ukuba simeme kakhulu ukuba sifunde kwaye sonwabe kwimizobo, imizekeliso ... njl., Kwaye ngesisindo esilula ukuze ikwazi ukufunda ii-pdfs kubonakala ngathi yinto ehlekisayo. incasa. Kufana nokwenza imoto eneentlobo zonke zeenkcukacha emva koko ithi iyahamba ngeenyawo ... nini uSuku luka-Epreli lesidenge eJapan? Andiyifumani. Eyona nto indicaphukisa kakhulu kukuba ukusikelwa umda, ukukwazi ukufunda ii-pdfs kuphela, sisithintelo simahla, ayisiyiyo eyokuba kunzima ukuyenza ifunde i-epubs okanye ezinye iifomathi, hayi, ayikabekwa kwincam yempumlo ... Argggh, ndiya kukhwaza entabeni, ndisiya empuma.
Ngaba kufanelekile ukunika ithebhulethi umntwana omncinci?
Ukuhlaziywa kweBoxox C65 okanye iOnyx eReaders